U beddelo sawir PDF bilaash ah: bogagga shabakadda ugu fiican | Madasha Mobile
U beddelo sawir PDF bilaash ah: bogagga shabakadda ugu fiican
Daniel Terrasa | 03/10/2021 12:00 | Barnaamijyada
Kombiyuutarka iyo taleefanka gacanta labadaba waxaa jira sawirro badan oo aan aragno, soo dejino ama dirno maalin kasta. Qoraalkan waxaan ku falanqayn doonnaa websaydhada iyo codsiyada aan haysanno si aan u fulinno ficilka u beddel sawir PDF.
Waa maxay ujeedada laga leeyahay sameynta noocyadan beddelaad? Caadi ahaan waxaan ka soo baxnaa qaabka sawirka JPG, PNG ama GIF midna PDF waqtiga daabacaadda. Waxa kale oo suurtogal ah inay tahay inaan samayno marka la keenayo nooc ka mid ah dukumintiga rasmiga ah (qaabka ugu badan ee la aqbalo waa .pdf). Sababahaas iyo kuwa kale awgood, waxaan danaynaynaa inaan ogaano hababka jira si sawir loogu beddelo PDF.
Halkan waxaa ah saddex siyaabood oo kala duwan oo loogu beddelo sawirrada PDF: laga bilaabo barnaamijyada lagu rakibay kombiyuutarkeenna, websaytyada ama adeegsiga codsiyada taleefanka gacanta. Oo mid kasta oo ka mid ah saddexdaan hab ayaan kuu soo bandhignaa dhawr ikhtiyaar. Markaa waxaad dooran kartaa midka ku habboon baahiyahaaga.
1 Barnaamijyada loogu beddelo sawir PDF
1.1 Beddelka PDF Altarsoft
1.2 Beddelka PDF ee IceCream
1.3 JPG ilaa Beddelka PDF
1.4 Beddelka PDF ee TalkHelper
2 Shabakadaha loogu talagalay sawirka onlaynka ah si loogu beddelo PDF
2.3 Sawir ku beddel PDF
3 Barnaamijyada moobiilka
3.1 Taraafiga Evernote
3.2 Lens Microsoft Office Lens
Barnaamijyada loogu beddelo sawir PDF
hay Laba sababood way caddahay in la go'aansado in lagu rakibo software noocan ah kombiyuutarradayada. Marka hore waa raaxo. Marka labaad, laakiin ugu yaraan, waa su'aasha ah asturnaanta. Barnaamijyadan marka la joogo dokumentigu wuxuu had iyo jeer ku jiraa kombiyuutarka. Kuwani waa kuwa ugu badan ee la isticmaalo:
Beddelka PDF Altarsoft
Beddelka PDF Altarsoft, fudud oo wax ku ool ah
Waa softiweer fudud oo sanado badan ka dambeeya, laakiin wuxuu sameeyaa wax kasta oo aad ka filan lahayd beddelaad noociisa ah. Beddelka PDF Altarsoft Gabi ahaanba waa bilaash waana mid aad u fudud in la isticmaalo, inkasta oo ay sidoo kale leedahay xaddidaadyo gaar ah. Tusaale ahaan, waxay kaliya kuu oggolaaneysaa inaad hal sawir marba mar beddesho. Maaha wax la taaban karo haddii ay tahay inaan la shaqayno faylal badan.
Soo dejiso Xiriirka: Beddelka PDF Altarsoft
Beddelka PDF ee IceCream
Degdeg ah oo aad u fudud in la isticmaalo. Iyadoo Beddelka PDF ee IceCream tirooyin badan oo sawirro ah ayaa si fudud loogu beddeli karaa jiid-iyo-dhibic. Barnaamijku wuxuu kaloo leeyahay ikhtiyaarro asturan oo xiiso leh.
Waa in la sheegaa in nooca tijaabintu uu dejinayo xuduudo gaar ah: 5 bog oo dukumiinti kasta oo PDF ah iyo 3 fayl halkii beddel. Si loo baabi'iyo caqabadahaas ma jiro wax kale oo aan ahayn in la helo nooca lacagta ah.
Soo dejiso Xiriirka: Beddelka PDF ee IceCream
JPG ilaa Beddelka PDF
Ikhtiyaar waxtar leh oo toos ah. Iyada oo leh fudud, ku dhawaad ​​spartan interface, JPG ilaa Beddelka PDF Waxaa naloo soo bandhigay inay tahay aalad xiiso u leh hawsha u beddelidda sawirka PDF. Intaa waxaa dheer, waxyaabo kale, waxay noo oggolaanaysaa inaan dooranno tayada sawirka kala duwan oo ka bilaabma 0 illaa 100%. Dabcan, nooca tijaabada bilaashka ah ayaa la heli karaa oo keliya 15 maalmood. Wakhtigan ka dib, waa inaad tagtaa midka lacag bixinta si aad u sii wadato adeegsiga softiweerkan.
Soo dejiso Xiriirka: JPG ilaa Beddelka PDF
Beddelka PDF ee TalkHelper
Barnaamij kale oo aad u faa'iido badan oo loogu beddelo sawirrada PDF, in kasta oo aan kaliya ka heli doonno ikhtiyaarka xorta ah noocyadiisa tijaabada ah. Tani waxay na siineysaa beddelaad leh ugu badnaan 10 bog natiijooyinkuna waa calaamadeysan yihiin.
Isku soo wada duuboo, faaiidada Beddelka PDF ee TalkHelper waa su'aal: waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhakhso leh ugu beddesho faylasha muuqaalka (JPG, PNG, TIFF, BMP iyo GIF) PDF oo aad sidoo kale u beddesho faylka Word, Excel, PPT iyo DWG faylasha PDF.
Soo dejiso Xiriirka: Beddelka PDF ee TalkHelper
Shabakadaha loogu talagalay sawirka onlaynka ah si loogu beddelo PDF
Qaab -dhismeedkan ayaa aad uga sii daran kuwii hore ee aan ku muujinnay qaybtii hore. Isbeddellada waa la sameeyaa online, hab fudud oo dhaqso badan, looma baahna in la rakibo barnaamijyo kuwaas oo xasuusta ku haysta aaladahayaga.
Khasaaraha kaliya ayaa ah in asturnaanta dukumiintiyadayada la dhaawici karo haddii ay dhacdo weerarada kombiyuutarka. Taasi waxay ka dhigeysaa websaydhadan mid aan la arki karin si loogu isticmaalo deegaanno xirfadeed. Si kastaba ha noqotee, haddii waxa ku jira aysan si gaar ah xasaasi u ahayn, mid ka mid ah goobahan soo socda ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan.
Adigoo wata Docupub waxaad u diri kartaa iskuxirka soo dejinta sawirrada ee PDF emayl kasta
Geedi socodka loogu badalayo sawirka PDF iyadoo loo marayo DOCUPUB runtii waa wax fudud. Bogan waxaan ku beddeli karnaa labada sawir ee qaababka PNG iyo JPEG si PDF saddex tallaabo: marka hore waa inaan doorannaa nooca Acrobat oo aan rabno inuu la jaanqaado, ka dibna waxaan helnaa faylka ku jira faylashayada (illaa 24 MB ) iyo ugu dambayn waxaan dooranaa habka maraakiibta.
Haa, habka dhoofinta. Taasina waa astaamaha ka dhigaya beddeluhu kan inuu ka duwan yahay kuwa kale: waxaan u soo diri karnaa xiriirinta soo dejinta emayl kasta.
Websaydaan wuxuu isu keenaa hawlo iyo fikrado badan oo loogu talagalay maaraynta dhammaystiran ee dukumiintiyada PDF. Dabcan, waxay sidoo kale kujirtaa bedelka faylka qaabab kale (sidoo kale sawirrada). Taasi waa sababta ay caddaalad u tahay in lagu daro HiPDF liiskayaga.
Nooca bilaashka ah wuxuu leeyahay xoogaa xaddidaad ah, dabcan. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa oo keliya shabakadda laba jeer maalintii, oo leh faylal gaaraya 10MB iyo ugu badnaan 50 bog halkii fayl. Laakiin aad bay u shaqaysaa.
Sawir ku beddel PDF
Img ilaa Beddelka PDF
Waa mid ka mid ah shabakadihii ugu horreeyay ee u muuqday inay qabtaan beddelaad noocan ah, laakiin in kasta oo ay taasi weli tahay midda ugu fiican. Waxaa laga yaabaa in is -dhexgalkiisu uusan ahayn kan ugu soo jiidashada badan, laakiin wuxuu u shaqeeyaa sidii la rabay: leh Sawir ku beddel PDF qaababka sawirka ugu badan waxaa loo rogi karaa PDF. Waxa ugu fiican: waxay bixisaa horudhac si loo hubiyo sida PDF -ka u eegi doono beddelidda ka hor. Dabcan, waa inaad gacanta ku qabataa hawsha, ku fayl garee. Suurtogal maaha in loo shaqeeyo kooxo.
Link: Sawir ku beddel PDF
Waxaa lagu daray amniga iyo asturnaanta iyadoo la adeegsanayo Smallpdf
In ka badan shaqadeeda, waa inaan ku darno degelkan liistada xulashooyinka si loogu beddelo sawir PDF si sabab qasab ah: waa mid ka mid ah kuwa yar oo ku daraya xal wax ku ool ah dhibaatada asturnaanta. IYO Yar-yar Waxay sidaas ku samaynaysaa iyadoo la raacayo hab fudud: dalbashada a sirta iyadoo la adeegsanayo sirta SSL dhammaan faylasha. Hal saac kadib markaad geliso shabakadda, kuwani si otomaatig ah ayaa loo tirtiraa.
Adeegyada Smallpdf waxaa loo isticmaali karaa muddada tijaabada ee bilaashka ah 14 maalmood.
Ugu dambayntii, waa inaan sahaminnaa qaab kale oo qalab ah oo loogu beddelo sawir PDF. Gaar ahaan, codsiyada taleefanka gacanta. Barnaamijyadan ayaa aad iyo aad loo adeegsadaa oo loo soo degsadaa, maxaa yeelay marba marka ka dambaysa dhammaanteen waxaan u isticmaalnaa taleefannadeena casriga ah waxyaabo badan. Ogaada, moobilku wuxuu la mid yahay kombiyuutar yar oo aan jeebka ku sidno.
Sida meelo kale oo badan, codsiyo cusub oo leh shaqooyin iyo suurogalyo cusub ayaa si joogto ah u muuqda marka ay timaaddo baaritaanka sawirka iyo beddelidda. Kuwani waa kuwa ugu fiican xilligan:
Evernote Scannable, kaliya ayaa loo heli karaa iPhone
Codsigan wuxuu noo oggolaanayaa inaan isla markiiba iskaanno dhammaan noocyada sawirrada, laga bilaabo kaararka ganacsiga ama rasiidhada, illaa sawirrada iyo sawirrada. Waxay la shaqaysaa nidaamka kaydinta iyo abaabulka otomaatiga ah ee sawirrada iyo beddelkooda ka dhashay PDF. Hadda Taraafiga Evernote waxaa kaliya oo heli kara dadka isticmaala iPhone iyo iPad
Link: Taraafiga Evernote
Lens Microsoft Office Lens
Sawir -qaade fudud laakiin wax ku ool ah kaas oo lagu baari karo dhammaan noocyada dukumiintiyada loona beddelo PDF. Kaliya waxaa diyaar u ah dadka isticmaala iPhone. Iyadoo Lens Microsoft Office Lens Natiijooyinka beddelidda waxaa lagu kaydin karaa Hal Qoraal ama Hal Drive. Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa suurtogalnimada in lagu tafatiro sawirrada aalado fudud.
Link: Lens Microsoft Office Lens
PDFElement, dalabka ugu fiican ee loogu beddelo sawirrada PDF
Waxaa laga yaabaa inay ugu fiican tahay codsiyada moobiilka marka ay timaado u beddelidda sawirrada PDF. Oo waa taas, PDFElement Kaliya ma daryeesho habka beddelidda, waxay kaloo naga caawisaa akhrinta iyo tafatirka dukumiintiyadayada PDF.
Waxa intaa dheer tan, dalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud u wadaagi karto dukumiinti PDF ah daruurta dhexdeeda adoo adeegsanaya koonto keliya oo noo adeegi doonta Windows, macOS X, iOS iyo Android. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka kale, PDFElement waxaa lagu heli karaa luqado badan waxayna ku dartaa softiweer gaar ah si loogu xafido faylasha PDF sirta isticmaalaha iyo milkiilaha.
U beddelo sawirka PDF Scanbot
Sida ikhtiyaarkii hore, waa scanner, laakiin sidoo kale waxay waxtar u leedahay hawsha u beddelidda sawirrada PDF. Scanbot Waxay ka sarreysaa wax walba si saxnimadeeda iyo tayo sare leh. Waxa kale oo aad u fudud in la isticmaalo: marka hore waa inaad farta ku fiiqdaa kamaradda taleefanka sawirka oo hawsha si otomaatig ah ayey u bilaabmaysaa. Kadib, waxaan haysanaa ikhtiyaar aan ku goyn karno iskaanka oo aan u tafatiri karno sida aan jecel nahay. Middaas awgeed, Scanbot wuxuu leeyahay afar nooc oo midab, dhalaal iyo is -barbardhig ah.
Qalab weyn oo gacmahaaga ku jira oo ku raaxeysta caan -ka weyn (in ka badan 20 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon adduunka oo dhan).
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » U beddelo sawir PDF bilaash ah: bogagga shabakadda ugu fiican
Sanduuqa aaladda ayaa ku lumay Ereyga, maxaan sameeyaa?
Sida loogu daro xarfo dheeri ah Word